Umenzi wehowuliseyili ye-FBA kunye noMthengisi | Ngexesha
Ukuthunyelwa kwiindawo zokugcina iimpahla zeAmazon FBA kuthathwa njengongeniso lweB2B kwilizwe lokuya. Ngaba uyafuna ukuthumela uluhlu lweempahla kwindawo yokugcina izinto yaseAmazon ngaphandle kwe China? Unokuziva ukhathazekile, imveliso ...
Ukuthunyelwa kwiindawo zokugcina iimpahla zeAmazon FBA kuthathwa njengongeniso lweB2B kwilizwe lokuya. Ngaba uyafuna ukuthumela uluhlu lweempahla kwindawo yokugcina izinto yaseAmazon ngaphandle kwe China? Unokuziva ukhathazekile, umenzi akaze alungiselele iimpahla ze-FBA, kuya kufuneka ucacise kaninzi. Ngaphaya koko, ukungenisa kwamanye amazwe kunzima kakhulu kwaye kuhlala kuyintloko. Ngoku silapha ukukunceda. Sibonelela abathengi ngeenkonzo zokuthatha abaqhubi kwizixeko ezikhulu zase China, ukulebhelisha imveliso, ukucoca amasiko kumazwe aya kuwo, kunye neenkonzo zokuhanjiswa kweemayile zokugqibela kwiindawo zokugcina iimpahla ze-FBA e-United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, United States, ECanada naseMexico. Nokuba uphi, iqela lethu elinamava labarhwebi liya kuhlala likugcina kuzo naziphi na iingxaki zesiko. NgumoyaimithwaloNgaba kubiza imali eninzi kakhulu? Akukho ngxaki. Siyakuxhasa ukuhanjiswa kwenkonzo yomoya okanye yolwandle kwindawo yokugcina izinto ye-FBA. Zombini ezi nkonzo zinokukunceda ugcine imali kwaye uhlangane neemfuno zebhajethi.
Iqala njani ukusebenza?
Eyethu Amalungiselelo Izisombululo zigubungela ngaphezulu kwama-200 amazwe kunye nemimandla kwihlabathi liphela ngeenkonzo zeposi, imigca ekhethekileyo kunye ukuvakalisaimeyile. Ukusuka ekufezekisweni kwe-e-commerce ukuhanjiswa kwempahla
Nceda unxibelelane nabasebenzi beenkonzo zethu kwi-Intanethi ukuze babhalise iakhawunti.
Thumela iimveliso zakho kwi-GZ yeXesha elingelide kwaye wenze isicwangciso sakho seAmazon.
Ababoneleli bethu banoxanduva lokufaka iilebheli kwiimveliso kunye nokulungiselela amaxwebhu aqhelekileyo ukuze athunyelwe.
Gcwalisa ukucocwa kwamasiko kwaye uhambise kwindawo yokugcina izinto ye-FBA.
Egqithileyo Uloyiko lomoya
Okulandelayo: Ukuhanjiswa kwenkonzo yamanye amazwe yokuhambisa iinkonzo kwi-DHL FedEx UPS China ukuya e-USA